Jolay 2021 - Fanentanana eran-tany ho an'ny fampianarana momba ny fandriam-pahalemana
Isam-bolana: Jolay 2021
Pax Christi USA dia manaiky an'i Rev. Bryan N. Massingale miaraka amin'ny loka 2021 ho an'ny mpampianatra fandriam-pahalemana
Jolay 31, 2021 0
Nandritra ny fanendrena azy ho Rev. Rev. Massingale ho an'ny Loka Mpampianatra ho an'ny fandriam-pahalemana tamin'ny 2021, dia nanoratra i Pearlette Springer, mpandrindra ny ekipa Pax Christi Anti-racism: "Fr. Bryan dia 'mpampianatra ny fandriam-pahalemana' tamin'ny ankabeazan'ny fiainany, nihoatra ny mihoatra ny fenitra mba hitohizan'ny ezaka hamahana ny tsy rariny ara-tsosialy ao amin'ny Eglizy Katolika. … Manohy manosika ny valopy ho an'ny vondrom-piarahamonina BIPOC sy LGBTQ izy. ” [tohizo ny famakiana…]
Jolay 26, 2021 0
Rehefa mizotra mankany amin'ny «Compact« Vehivavy, fandriam-pahalemana sy fiarovana ary asa maha-olona (WPS-HA) »ny Fanentanana eran-tany ho an'ny fandriam-pahalemana, dia maneho ny andraikitray ho mpandray anjara amin'ny fiarahamonim-pirenena izahay, ny niavian'ny fitsipika iraisam-pirenena manan-danja indrindra izay miantso. GCPE dia manentana ny mpamaky sy ny mpikambana hiantso ny fikambanan'ny fiarahamonim-pirenena rehetra anaovany sonia sy hiditra amin'ny Compact. [tohizo ny famakiana…]
Jolay 21, 2021 0
Matetika ny tanora dia voatosika hiodina amin'ny fizotran'ny fanaovana politika amin'ny sehatry ny fanabeazana, ny fandriam-pahalemana, ny faharetana ary ny zom-pirenena manerantany; Tsy raisina ho mpandray anjara fototra izy ireo. Ny hetsika Talking Across Generations on Education (TAGe) dia mikendry ny hanome hery ny tanora Nizeriana amin'ny alàlan'ny fanamorana ny fifanakalozan-kevitra tsy misy teritery eo amin'ny samy tanora miaraka amin'ireo mpanapa-kevitra zokiolona ambony sy avo lenta [tohizo ny famakiana…]
Fiainana miaina ao amin'ny UNSCR 1325 - Miantso ny herin'ny fandriam-pahalemana ao UN ny vondrona vehivavy
Jolay 19, 2021 3
Ny fanapahan-kevitry ny UN Security Council 1325 momba ny vehivavy, ny fandriam-pahalemana ary ny fiarovana dia manery ny fanjakana mpikambana hanome fiarovana ny vehivavy amin'ny toe-javatra misy fifandonana. Toy ny fenitra sy fenitra ara-dalàna rehetra, ny fampiasana azy dia mitoetra amin'ny fampiharana azy amin'ny toe-javatra tena misy. Mihetsiketsika ny fiarahamonim-pirenena hanetsika ireo firenena mpikambana ao amin'ny Firenena Mikambana mba hampihatra ny fotokeviny ao Afghanistan. Ny fiarovana dia manome koa ny antony hametrahan'ny ONU mpampandry tany. [tohizo ny famakiana…]
Fanabeazana manaparitaka: resadresaka nifanaovana tamin'i Linda Tuhiwai Smith
Jolay 19, 2021 0
Ity resadresaka ity dia mahataona ilay manam-pahaizana atao hoe Linda Tuhiwai Smith ao anaty adihevitra iray momba ny fomba ahafahantsika manafoana ny fanabeazana. [tohizo ny famakiana…]
Mie Roesdahl: "Ny mpampandry tany eo an-toerana no fototry ny fandriampahalemana maharitra"
Jolay 18, 2021 0
Any an-tampon'ny tantara ny fifanolanana mahery setra. Miverina amin'ny taham-pahavitrihana mampatahotra izy ireo na eo aza ny ezaka ataon'ny rafitra fananganana fandriam-pahalemana manerantany hisorohana ny fifandonana sy ny fandriam-pahalemana. Mie Roesdahl dia manazava ny antony mahatonga ny fanomezana izay ilaina amin'ny fandriam-pahalemana tarihin'ny eo an-toerana ho fomba iray hananganana fandriampahalemana maharitra. [tohizo ny famakiana…]
Ho resy ny rehetra raha tsy hoe 'mihavana amin'ny planeta' ny olombelona, ​​hoy i Guterres
Jolay 15, 2021 0
Ny sekretera jeneralin'ny ONU António Guterre, ankoatry ny mpitarika hafa, dia miaro ny fitsarana tontolo iainana mihetsika manoloana ny fiovan'ny toetr'andro. [tohizo ny famakiana…]